Maalinta: Diseembar 4, 2019
Jaamacadda Istanbul waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta; Qodobbada laxiriira ee Sharciga ayaa tiriyay 2547, oo lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee 12.06.2018, ayaa lagu daabacay cutubyada soo socda ee Jaamacadda Istanbul. [More ...]
Xubnaha macalimiinta 2547 waa la shaqaaleysiin doonaa iyadoo loo eegayo qodobbada la xiriira ee Sharciga Tacliinta Sare iyo Xeerarka u yaal Gudbinta iyo Magacaabista Xubnaha Kulliyadda. Murashaxiinta, Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 68 657. [More ...]
Jaamacadda Bursa Uludağ waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta; Iyada oo la raacayo qodobbada Sharciga Tacliinta Sare ee loo yaqaan '2547' iyo qawaaniinta lagu dhaqmayo iyada oo lagu saleynayo sharcigaan, go'aaminta Golaha Guurtida ee Jaamacadeena waxaa aasaasay [More ...]
Turkey Dhuxul Qadarka Law No. 399 ku xiran xaaladda heshiis ee injineerada qoritaanka samaynaya. Sida ku cad natiijada imtixaanka qoraalka iyo afka ah, qoondada iyo aqoonta shaqaalaha injineerka loo shaqaaleysiiyay ayaa lagu sheegay xayeysiinta. Codsiyada ayaa lagu dhawaaqay [More ...]
Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta ayaa soo saartay ogeysiis cusub oo shaqaalaysiin. Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta 25 Noofambar iyo 09 Disembar 2019 shaqaaleyn qorista [More ...]
8, oo kujira fasalada Adeegyada Maamulka Guud ee lagu shaqaaleysiin doono Madaxtooyada Jooga Gudiga Xisaabaadka Maaliyada ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda. Iibsashada Kireyska Hanti-dhowrka 15 ee tababbaraha shaqaalaha ee maaliyaddii sii haysay ee Kusoo Kordha Shaqaalaha 'Trainee Treasury Controller' [More ...]
Isbitaalka Jaamacadda Yozgat Bozok ama cutubyo kale oo uu magacaabi doono Rectorate, 2018 Year KPSS (kooxda B) oo ku saleysan darajooyinka, 657 / B qodobka 4 / 06 / 06 taariikhaysan iyo 1978 / 7 lambar BKK [More ...]
657 Sharciga ku saabsan Shaqaalaha Rayidka. Qodobka X (Qodobka B) ee 4 ee ku taariikhaysan 06.06.1978 isla markaana ku lifaaqan Go'aanka 7 / 15754 [More ...]
Arrimaha Diinta ee xafiiska gobolka; tirada jagooyinka ku xusan miiska ee ku saleysan 2018 iyo 2019 KPSS dhibco ee shaqaalaha kuwaas oo fasalkooda, cinwaankiisa, heerka waxbarashadiisa iyo lambarkoodu hoos ku yaal. [More ...]
Si looga shaqaalaysiisto wakhti buuxa Waaxda Qaanuunka Macluumaadka ee Jaamacada Marmara, Qandaraasyada meli ee Qeybaha Xogta Miisaaniyada Weyn ee Hay'adaha Dowlada iyo Ururada ayaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee Gazette No. 31 / 12 / 2008 [More ...]
Wax ka badal lagu sameeyo Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 657 si loogu shaqaaleeyo Maxkamadda Sare ee Rafcaanka. Qodobka X (B) ee Qodobka 4 / 06 / 06 ee taariiqda iyo 1978 / 7 Golaha Wasiirrada Go'aan [More ...]
Maxkamadda Xisaabaadka ayaa shaqaaleysiin doonta shaqaale qandaraas leh. Sida ku xusan ogeysiiska lagu daabacay DPB, Maxkamadda Xisaabaadka waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaale inta u dhexeysa 29 November iyo 16 Diseembar 2019. Shaqaale la shaqaaleysiinayo, TCA [More ...]
Tokat Gaziosmanpaşa University 2547 ayaa tiriyey Sharciga Tacliinta Sare iyo Xeerarka loogu talagalay Kor u qaadista iyo Balanqaadida Shaqaalaha Tacliinta iyo 94 iyada oo la raacayo Shuruudaha Codsiga iyo Mabaadi'da Codsiga ee Xubnaha Kulliyadaha ee Tokat Gaziosmanpaşa University [More ...]